Shop Supervisor | HHT International Co., Ltd ﻿
1.12.2018, Full time , Distribution / Logistic
Company: HHT International Co., Ltd
HHT International is the distributor of Puratos Brand in Myanmar.
•	ဆိုင်မှချမှတ်ထားသောအရောင်းTarget များပြည့်မီစေရန်သက်ဆိုင်ရာ Sales Target များချမှတ်နိုင်ရန်။
•	ဆိုင်၏အရောင်းစာရင်းနှင့်ပစ္စည်းလက်ကျန်(Balance) စာရင်းများအားစိစစ်ဆောင်ရွက်နှိုင်ရန်။
•	Customerများ၊ Supplier များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	Stock များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ Promotionများဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်။
•	Customer Complaint နှင့် Customer Services အားထိန်းချုပ်နိုင်ရန်။
•	"Event" တွင်ပြုလုပ်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ပွဲများ၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတာဝန်ချထားပေးမှုအားသေချာစွာ လိုက်နာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
•	ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တာဝန်ချထားပေးမှုအပေါ်တွင် သေချာစွာလိုက်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
•	စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း(သို့)Supermarket ဆိုင်ကြီးများတွင် လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက်ရှိသူ။
•	စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ(နှင့်) အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းအောက်လက်မှတ်များရှိသူ
•	ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ
•	Shop Management အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	English စကားပြောနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Work location Rm 12/C, Bldg 608, 12th Flr, Merchant Rd., Bosonpat Condo,(အခန်း ၁၂/C၊ တိုက် ၆၀၈၊ ၁၂ထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊)
Job Function: Shop Supervisor
HHT International Co., Ltd
•	Ensure all book-keeping are accurately recorded electronically •	Analyze transactions and recommend actions to management if needed •	Compliance with all fiscal & statutory reporting requirements •	Provide monthly P&L and Balance Sheet for entities onatimely basis •	Close accounts onayearly basis •	Provide monthly cash-flow statements •	Audit •	Stock take (in conjunction with factory manager) •	Review of inventory modules •	Petty cash & bank reconciliations •	Maintaining Fixed Asset register � ...
•	Monitoring Stock control Quantity, first in first out /Expired/ Damage, etc. •	Raw Material Receiving •	Logistics dispatch with planning delivery timetables •	Responsible for conducting monthly stock taking as per stock take instructions, tracking and tally stock movements daily, verifying. Able to assist on COGS calculation. Other Ad-hoc assigns. •	Tracking products through depots to make sure they arrive at their destination •	Control the stock value and inventory accurately. •	Monitor the purchase order from customersa...
•	ဆိုင်ခွဲတခုလုံး၏ရောင်းအားအတက်/အကျကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။ •	ဆိုင်ခွဲတခုလုံး၏စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စအ၀၀ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။ •	ဆိုင်ခွဲဝန်ထမ်းများ၏၀န်ထမ်းရေးရာကိစ္စအ၀၀ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။� ...
Shop Supervisor Admin ,Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon HHT International Co., Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Shop Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon